The MYAWADY Daily: May 2017
31-5--2017 Thu Ta Alin by TheMyawadyDaily on Scribd
Posted by myawady at 12:44 PM No comments:
3152017 Myawady Magazine by TheMyawadyDaily on Scribd
ရှမ်းပြည်နယ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ JMC-S (Shan) ရုံးခန်းသစ်ဖွင့်ပွဲနှင့် သတ္တမအကြိမ်အစည်းအဝေးပြုလုပ်
ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ထွန်းထွန်းနောင် ကျောက်ပန်းချီကားချပ်အား အရှေ့အလယ်ပိုင်း တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်
ရှမ်းပြည်နယ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ (JMC-S)သတ္တမအကြိမ်အစည်းအဝေး ကျင်းပစဉ်။
ရှမ်းပြည်နယ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီ JMC-S (Shan) ရုံးခန်းသစ်ဖွင့်ပွဲကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရှမ်းပြည်နယ် (တောင်ပိုင်း)၊ခိုလမ်မြို့ရှိ အဆိုပါရုံးခန်း၌ ပြုလုပ်ရာပြည်ထောင်စုအဆင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ JMC-U မှ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ထွန်းထွန်းနောင်နှင့်အဖွဲ့ဝင်များ၊ ရှမ်းပြည်နယ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီ (JMC-S) ဥက္ကဋ္ဌ အရှေ့အလယ်ပိုင်း တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်သန်းလှိုင်နှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့မှ တာဝန်ရှိသူများ၊ ရှမ်းပြည်နယ်ပစ်ခတ် တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီ (JMC-S) အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဖိတ်ကြားထားသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာ ရှမ်းပြည်နယ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီ JMC-S (Shan) ရုံးခန်းသစ် ဆိုင်းဘုတ်အား ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ထွန်းထွန်းနောင်က စက်ခလုတ်နှိပ် ဖွင့်လှစ်ပေးကာ JMC-U အဖွဲ့ဝင်များ ကအမွှေးနံ့သာရည် များပက်ဖျန်းပြီး တိုင်းမှူးထံသို့ အမှတ်တရကျောက်ပန်းချီ ကားချပ်အား ပေးအပ်သည်။
ထို့နောက် ရှမ်းပြည်နယ် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ ပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေး ကော်မတီ (JMC-S) သတ္တမအကြိမ် အစည်းအဝေးကို ပြုလုပ်ရာ တိုင်းမှူးနှင့် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများက နှုတ်ခွန်းဆက်စကားများ အသီးသီး ပြောကြား ကြသည်။
ဆက်လက်၍ JMC-S အဖွဲ့ဝင်များက ကော်မတီ၏လုပ်ငန်းတာဝန်များနှင့် ဆောင်ရွက်သွားမည့် အစီအမံများကို ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ထွန်းထွန်းနောင်က ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် လေပြင်းတိုက်ခတ်၍ ပျက်စီးမှုများဖြစ်ပေါ် ခဲ့သည့်နေရာများ၌ ကူညီကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်
တပ်မတော်သားများက လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် သစ်ပင်များလဲကျနေခြင်းကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းပေးစဉ်။
တပ်မတော်သားများက လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် လဲကျခဲ့သည့်သစ်ပင်များကို ဖယ်ရှားရှင်းလင်းစဉ်။
လေပြင်းတိုက်ခတ်မှုကြောင့် အဆောက်အအုံများ အမိုးလန်ပျက်စီးနေမှုကို တွေ့ရစဉ်။
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း မိုရာ၏အရှိန်ကြောင့် ယနေ့နံနက်အစောပိုင်းမှ စတင်၍ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း လေပြင်းများ တိုက်ခတ်ခဲ့သဖြင့် စစ်တွေ၊ တောင်ကုတ်၊ ပုဏ္ဏားကျွန်း၊ ကျောက်ဖြူ၊ သံတွဲ၊ မြောက်ဦး၊ မာန်အောင်နှင့် ရသေ့တောင်မြို့နယ် များအတွင်း၌ သစ်ပင်များလဲကျခြင်း၊ ဓာတ်တိုင်များကျိုးကျ၍ မီးကြိုးများ ပြတ်တောက်ခြင်း၊ စာသင်ကျောင်းများ၊ ဌာနဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်မှုနှင့် လူနေအဆောက်အအုံများ၊ ဘုန်းကြီးကျောင်းများ၊ ဆေးပေးခန်းများ ၏အမိုးများလန်ကျကာ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည်။
ထိုသို့လေပြင်း တိုက်ခတ်၍ ပျက်စီးမှုများ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သည့် စစ်တွေမြို့ရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး၊ မြောက်ဦးမြို့၊ အလယ်ဈေးရပ်ကွက်၊ နန်းတော်ရာကုန်းနှင့် အမှတ်(၁) အခြေခံပညာ အထက်တန်းကျောင်းများသို့ အနောက်ပိုင်း တိုင်းစစ် ဌာနချုပ်မှ တပ်မတော်သားများက သွားရောက်၍ လဲကျပြိုကျကာ လမ်းပိတ်ဆို့နေသည့် သစ်ပင်သစ်ကိုင်းများအား ဖယ်ရှားရှင်းလင်းခြင်း၊ လျှပ်စစ်မီးကြိုးများအား ရှင်းလင်းခြင်း၊ ရေဝပ်၍ ရေအိုင်နေသည့် နေရာများအား ရေများ ဖောက်ထုတ်ခြင်းစသည့် ကူညီကယ်ဆယ်ရေး လုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အတိတ်သမိုင်းတွင် တိုင်းရင်းသားအားလုံး စုစည်းညီညွတ်စွာဖြင့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင် တူရကီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Kerem Divanlioglu အား လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ်။
အဓိကတိုင်းရင်းသား ၈ မျိုးနှင့် တိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုပေါင်း ၁၃၀ ကျော်ရှိသော နိုင်ငံတစ်ခုအနေဖြင့် တိုင်းရင်းသား စုစည်းညီညွတ်မှုရရှိရန်မှာ ခက်ခဲသော်လည်း အတိတ်သမိုင်းတွင် အနော်ရထာ၊ ဘုရင့်နောင်၊ အလောင်းမင်း တရားကြီးတို့လက်ထက် မိမိတို့တိုင်းရင်းသားများအားလုံး စုစည်းညီညွတ်စွာဖြင့် ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကို ထူထောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ တစ်ဖက်တွင်လည်း မိမိနိုင်ငံကိုလိုနီဖြစ်ခဲ့စဉ်က နယ်ချဲ့ဗြိတိသျှတို့၏ခွဲခြားဆက်ဆံ အုပ်ချုပ်ခဲ့မှုကြောင့် တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း အထင်အမြင်လွဲမှားမှုများကို ယနေ့ တိုင်ဖြေရှင်းနေရဆဲဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းသမိုင်းကြောင်း ဖြစ်စဉ်များအရ မိမိတို့အနေဖြင့် ဒို့တာဝန်အရေးသုံးပါးကို ထိန်းသိမ်းကာကွယ် စောင့်ရှောက် ကြရမည် ဖြစ်ကြောင်းဖြင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ယနေ့နံနက် ၁၁ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ ဘုရင့်နောင်ရိပ်သာ ဧည့်ခန်းမဆောင်၌ တူရကီ နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E.Mr. Kerem Divanlioglu အား လက်ခံတွေ့ဆုံရာ၌ ထည့်သွင်းပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲသို့ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့်အတူ ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံး (ကြည်း)မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးထွဋ်နှင့် တာဝန်ရှိသူတို့ တက်ရောက်ကြပြီး တူရကီနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီးနှင့်အတူ သံရုံးဒုတိယ အကြီးအကဲ Mr. Eymen Ozsahin တို့ တက်ရောက်ကြသည်။
ဦးစွာဧည့်သည်တော် သံအမတ်ကြီးက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှုအမွေအနှစ်များကို စိတ်ဝင်စားပါကြောင်း၊ တပ်မတော်စစ်သမိုင်းပြတိုက်သို့ ရောက်ရှိလေ့လာစဉ် ပထမမြန်မာနိုင်ငံတော် ထူထောင်ခဲ့သည့် အနော်ရထာမင်း လက်ထက်ရှေး နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀ ကျော်ခန့်ကပင် မြန်မာ-တူရကီနှစ်နိုင်ငံ၏ ရပ်တည်မှု၊ ဆက်ဆံမှုများ ရှိခဲ့ကြောင်း၊ ယဉ်ကျေးမှုနှင့်လူမှုရေးဆိုင်ရာ တူညီသည့် သမိုင်းကြောင်းများ ရှိသည်ကိုလည်း တွေ့ရှိရပါကြောင်း ပြောကြား၍ လက်ရှိနှစ်နိုင်ငံအကြား လေကြောင်းဆိုင်ရာ၊ ပညာရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုဆိုင်ရာ၊ စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ လုပ်ဆောင်နေသည့် အခြေအနေများ၊ မြန်မာ့တပ်မတော်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် နိုင်မည့် အခြေ အနေများ၊ တူရကီနိုင်ငံ၌ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး ဆောင်ရွက်ရာတွင် ရင်ဆိုင်နေရသည့် အကြမ်းဖက်မှုကိစ္စရပ်များ၊ နိုင်ငံ၏လုံခြုံရေး၊ ဒီမိုကရေစီရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုး တက်မှုများ လုပ်ဆောင်ရာတွင် ပြင်ပပယောဂ ၀င်လာပါက အခက် အခဲများတွေ့ရှိနိုင်မှုအခြေအနေများကို ရှင်းလင်းဆွေးနွေးသည်။
ဆက်လက်ပြီး တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်က မြန်မာနိုင်ငံနှင့် တူရကီနိုင်ငံသည် အလှမ်းကွာဝေးသော်လည်း မိတ်ဆွေနိုင်ငံများဖြစ်ကြောင်း၊ ရှေးယခင်တူရကီ အင်ပါယာမှာ များစွာကြီးမားကျယ်ပြန့်ပြီး ယဉ်ကျေးမှု အရ၊ နည်းပညာအရ၊ စီးပွားရေး အရမြင့်မားသည်ကို လေ့လာသိရှိရပါကြောင်း၊ လက်ရှိအခြေအနေတွင်လည်း နှစ်နိုင်ငံ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ နယ်ပယ်များစွာရှိကြောင်း၊ တစ်ချို့စီးပွားရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုများ တွင်နောက်ကွယ်မှ ကိစ္စရပ်များ ပါဝင်မှုများရှိနေသည်ကို တွေ့ရှိရ၍ သိရှိလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်မှုကာကွယ် တားဆီးရေး လုပ်ငန်းများမှာလည်း တစ်နိုင်ငံတည်းလုပ်ဆောင်၍ မရသဖြင့် တပ်မတော် နှစ်ရပ် အကြားအကြမ်းဖက်မှု ဆိုင်ရာများတွင် အပြန်အလှန်သတင်းဖလှယ်ရယူ၍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း၊ နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော် နှစ်ရပ်အကြား ဆက်သွယ်မှု လမ်းကြောင်းများ ယခုထက် ပိုမိုတိုးမြှင့်လုပ်ဆောင် သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြန်လည်ဆွေးနွေးသည်။
ယင်းနောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင်လုံ ဒုတိယအစည်းအဝေး ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု၊ ရခိုင်ဒေသတည်ငြိမ် အေးချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အတွက် လုပ်ဆောင်နေမှု၊ တူရကီနိုင်ငံအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်နှင့်ပတ်သက်၍ ရပ်တည်လုပ်ဆောင်နေမှု အခြေအနေများ၊ အဓိကအားဖြင့် စာရင်းဇယားပြုစုပြီး စိစစ်နိုင်ရေးအတွက် နားလည်လက်ခံ လိုက်ပါလုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်မှု၊ ရိုးသားမှုနှင့် ယုံကြည်မှုအပေါ်တွင် အခြေခံလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် အောင်မြင်မှုရရှိ နိုင်ကြောင်းတို့အား အပြန်အလှန်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နှင့် တူရကီနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးတို့သည် အမှတ်တရ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ အပြန်အလှန်ပေးအပ်ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
In history, Union of Myanmar was established with united strength of the entire national people
Senior General Min Aung Hlaing holds talks with Ambassador of Turkey to Myanmar H.E. Mr. Kerem Divanlioglu.
Asacountry with eight major ethnic races and over 130 other ethnic races, unity seems to be difficult for Myanmar, but in history great kings like Anawratha, Bayintnaung and Alaungphaya could establish the Union of Myanmar with the united strength of the entire national people. However, the country is still resolving the doubts among the national races caused by the divide-and-rule policy of the British when it wasacolony. Hence, our history teaches us to safeguard Our Three Main National Causes, said Commander-in-Chief of Defence Services Senior General Min Aung Hlaing at his meeting with Ambassador of Turkey to Myanmar H.E. Mr. Kerem Divanlioglu at Bayintnaung Parlour here at 11 am yesterday.
Also present at the meeting together with the Senior General were Lt-Gen Soe Htut of the Office of the Commander-in Chief (Army) and officials. The ambassador was accompanied by the deputy head of the embassy Mr. Eymen Ozsahin.
First, the ambassador expressed interest in Myanmar’s ancient cultural heritage, saying during his visit to Defence Services Museum he witnessed the stance of Myanmar and Turkey and their bilateral relations over 1000 years during the reign of King Anawratha who founded the First Myanmar Kingdom and the similarities in cultural and social histories. He then explained the current cooperation in the aviation, educational development and economic sectors of the two countries, the potential for extending cooperation with the Tatmadaw, terrorism Turkey is facing in its national defence undertakings, the possible hardships the outside interferences can trigger against the national security, democratization and development undertakings.
The Senior General said although Myanmar and Turkey are far away from one another, they are friends. The ancient empire of Turkey was much extensive, enjoying high level of culture, knowhow and economy.
At present, the two countries have bilateral cooperation in many areas. Some issues of economic cooperation should be aware as they have behindthe-scenes complicity. Anti-terrorism measures cannot be taken byasingle country so cooperation between the two militaries is required in exchanging information. Myanmar would promote the contacts between the two militaries, said the Senior General.
Then, both sides cordially discussed Myanmar’s peace process, holding of the Union Peace Conference-21st Century Panglong (second session), peace, stability and development efforts for Rakhine State, Turkey’s stance on Rakhine State, the need to understand and accept the citizenship verification process by making lists and achieving of success if the process is based on honesty and trust.
After the meeting, the Senior General and the Turkish ambassador exchanged gifts.
3152017 YadanarponDaily by TheMyawadyDaily on Scribd
3152017 MyawadyDaily by TheMyawadyDaily on Scribd
ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “မိုရာ”ကြောင့် နေအိမ်အဆောက်အဦးများ ဈေးဆိုင်များ၊ စားပင်သစ်ပင် ပျက်စီးဆုံးရှုံး
ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တွင် ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း “မိုရာ”သည် ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းသို့ ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့မှုကြောင့် နေအိမ်အဆောက်အဦးများ ရန်ကုန်-စစ်တွေ လမ်းဘေးဝဲယာရှိ ဈေးဆိုင်များ စိုက်ပျိုးထား သောစားပင်များနှင့် သစ်ပင်များ ပျက်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း သိရှိရသည်။
မုန်တိုင်း တိုက်ခတ်မှုမှာ မေလ (၃၀) ရက် နံနက် ၁ နာရီမှ ၅ နာရီအတွင်း အပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်ခဲ့ပြီး စစ်တွေ၊ ကျောက်ဖြူ၊ ရမ်းဗြဲ၊ မာန်အောင်၊ မောင်တော၊ ဘူးသီးတောင်၊ မြောက်ဦး၊ ပုဏ္ဍာကျွန်း၊ ကျောက်တော်၊ မင်းပြား၊ မြေပုံ၊ ပေါက်တောမြို့နယ် တို့တွင်ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးမှု များရှိခဲ့ကြောင်း ဒေသခံတို့က ဆိုသည်။“ကျွန်တော်တို့ အိမ်ကလေးမြို့ မြစ်ကမ်းနားမှာမို့ အိမ်သားတွေ အားလုံး တစ်ယောက်မှ မအိပ်ရပါဘူး။ လေတိုက်တာ တော်တော် ပြင်းပါတယ်။ ရေစီးပြင်းတာမို့ မြစ်ကမ်းပါး (၄)ပေ ပြိုဆင်းသွားတယ်။ အခု ကမ်းပြိုတာမှာ အိမ်မပါသွားဖို့ကို ဆုတောင်းနေရတယ်။ ကျွန်တော့်အိမ်အပါအဝင် (၅)ဆောင်က အမိုး၊ အကာတွေ လှန်သွားတယ်။ သစ်ပင်ကြီးတွေ အမြစ်ကျွတ် ပြိုလဲသွားတယ်။ ပြီးတော့ မြို့ပြင်ဖက်မှာရှိတဲ့ ဆီဆိုင် (၁၀)ကျော် အားလုံး ပြိုလဲသွားတယ်။”ဟု မင်းပြားမြို့ ပြည်တော်သာ ရပ်ကွက် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးသိန်းထွန်းက ပြောသည်။
မုန်တိုင်း သတိပေးချက်အား မြို့နယ်များတွင် သက်ဆိုင်ရာမှ မေလ (၂၉) ရက်တွင် သတိပေးထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး မုန်တိုင်းအရှိန်ကြောင့် မေလ (၃၀) ရက်နေ့တွင်လည်း မိုးသည်းထန်နေပြီး ပြည်နယ်အတွင်း ပြေးဆွဲနေသော အမြန် ရေယာဉ်များ၏ ခရီးစဉ်များကို ရပ်တန့်ထားရပြီး ဈေးများလည်း ပိတ်ထားရကြောင်း သိရသည်။
ပင်လယ်ပြင်မှာ ငါးဖမ်းရေယာဉ်များမှ နီးစပ်ရာ ပင်လယ်ကမ်းစပ်များနှင့် မြစ်၊ချောင်းများသို့ ဝင်ရောက်ကာ ရှောင်းရှားနေရပြီး လက်ရှိအချိန်အထိ လေပြင်းတိုက်ခတ်၍ မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းနေဆဲ ဖြစ်သည်။ “စစ်တွေမှာ အပျက်အဆီးများတယ်။ ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ ပြည်နယ်လွှတ်တော် အဆောက်အဦး တွေတောင် ပျက်စီးသွားတယ်။ လွှတ်တော်ရုံးနဲ့ ရိပ်သာမှာ အမိုးတွေ လှန်သွားတယ်။ ဆီလင်တွေ ပြိုကျသွားတယ်။ အခု အချိန်အထိမောင်တော ကကျွန်တော့် မိသားစုကို ဖုန်းဆက်လို့ မရသေးဘူး။ မောင်တောမှာလည်း အခြေအနေ ဆိုးတယ်လို့ ကြားနေရတယ်။“ဟုမောင်တောမြို့နယ်မှ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ့်စားလှယ် ဦးမောင်အုန်းက ပြောသည်။
ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည် ဘင်္ဂလားပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြု၍ စစ်တွေမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် (၄၀) ခန့်အကွာမှ လေတိုက်နှုန်းမှာ တစ်နာရီလျှင် မိုင် (၆၀) ဖြင့်တိုက်ခတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ မုန်တိုင်းကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ် ကျေးလက်ဒေသများတွင် ပိုမို အပျက်အဆီးများနေပြီး ဒေသခံများအနေဖြင့် ဘုန်းတော်ကြီး ကျောင်းများတွင် ယာယီခိုလုံ နေထိုင်နေကြရကာ လက်ရှိတွင် မြို့ပေါ်ရှိ အပျက်အစီးများအား မီးသတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်များ၊ စည်ပင်သာယာ ဝန်ထမ်းများနှင့် ဒေသခံတို့က ရှင်းလင်းနေကြရကြောင်း သိရသည်။
ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ- (၂၁)ရာစု ပင်လုံ (ဒုတိယ အစည်းအဝေး) အောင်မြင်စွာ ကျင်းပပြီးစီး
ပြည်ထောင်စြုငိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင်လုံကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဌနိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ပြည်ထောင်စြုငိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင်လုံ (ဒုတိယအစည်းအဝေး) ပြည်ထောင်စုသဘောတူစာချုပ် အစိတ်အပိုင်း (၁) လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲအခမ်းအနားတွင် ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားစဉ်။
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ- (၂၁) ရာစုပင်လုံ (ဒုတိယအစည်းအဝေး) ပြည်ထောင်စု သဘောတူစာချုပ် အစိတ်အပိုင်း (၁) လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ မြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန-၂ (MICC-2 )၌ကျင်းပရာ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင်လုံ ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်ကျေးဇူး တင်စကား ပြောကြားသည်။
အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ (UPDJC) ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများ၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များ၊ အစိုးရအစုအဖွဲ့၊ လွှတ်တော်အစုအဖွဲ့၊ တပ်မတော်အစုအဖွဲ့၊တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများအစုအဖွဲ့၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ အစုအဖွဲ့မှ ခေါင်းဆောင်များနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ၊ အစုအဖွဲ့ အသီးသီးမှ ပါဝင်သင့် ပါဝင်ထိုက်သူများ၊ လေ့လာသူများ၊ ဖိတ်ကြားထားသူများနှင့် တာဝန်ရှိသူများတက် ရောက်ကြသည်။
ညီလာခံတွင် ဦးဆောင်သဘာပတိအဖြစ် ဖြားတန်ခွန်ဥက္ကာက ဆောင်ရွက်ပြီး သဘာပတိ အဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာပြည့်၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ ခွန်သိန်းဖေနှင့် ဦးဉာဏ်ဝင်းတို့က ဆောင်ရွက် ကြသည်။
သဘာပတိ ဖြားတန်ခွန်ဥက္ကာက ဦးစွာအဖွင့် အမှာစကား ပြောကြားသည်။ ထို့နောက် ကဏ္ဍအလိုက် မူဝါဒသဘော တူညီချက်များကို တင်သွင်းကြရာ တပ်မတော်အစုအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဦးခင်ဇော်ဦးက နိုင်ငံရေး ကဏ္ဍဆိုင်ရာ မူဝါဒ အဆိုပြုချက်များကို လည်းကောင်း၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ အစုအဖွဲ့ကိုယ်စားလှယ် စောမြရာဇာလင်းက စီးပွားရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ မူဝါဒအဆိုပြုချက်များကို လည်းကောင်း၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ အစုအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဦးနိုင်ငံလင်းက လူမှုရေးကဏ္ဍဆိုင်ရာ မူဝါဒအဆိုပြုချက်များကို လည်းကောင်း၊ လွှတ်တော်အစုအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဦးအောင်စိုးက မြေယာနှင့်သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ကဏ္ဍဆိုင်ရာ မူဝါဒအဆိုပြုချက်များကို လည်းကောင်း တင်သွင်းကြသည်။
ထို့နောက် အစိုးရအစုအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဦးနိုင်ဆွေဦး၊ လွှတ်တော်အစုအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဦးဌေးဝင်းအောင် (ခ) ဦးပြုံးချို၊ တပ်မတော်အစုအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဗိုလ်မှူးကြီး အောင်ခင်သိန်း၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းများ အစုအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ အစုအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိန်းထွန်း တို့က ကဏ္ဍအလိုက် တင်သွင်းသည့်အချက် ၃၇ ချက်ကို ထောက်ခံဆွေးနွေးကြသည်။
ယင်းနောက် သဘာပတိ ဖြားတန်ခွန်ဥက္ကာက ကဏ္ဍအလိုက် တင်ပြလာသော မူဝါဒအဆိုပြုချက်များ ဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေးကဏ္ဍ မူဝါဒအဆိုပြုချက် ၁၂ ချက်၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍ မူဝါဒအဆိုပြုချက် ၁၁ ချက်၊ လူမှုရေးကဏ္ဍ မူဝါဒ အဆိုပြုချက် လေးချက် ၊ မြေယာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍ မူဝါဒအဆိုပြုချက် ၁ဝ ချက် စုစုပေါင်း ၃၇ ချက်အပေါ် အစိုးရအစုအဖွဲ့၊ လွှတ်တော်အစုအဖွဲ့၊ တပ်မတော် အစုအဖွဲ့၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်း များအစုအဖွဲ့နှင့် နိုင်ငံရေးပါတီများ အစုအဖွဲ့တို့မှ ထောက်ခံကြောင်း တင်ပြပြီးဖြစ်သဖြင့် ကဏ္ဍအလိုက် မူဝါဒအဆိုပြုချက် အားလုံးကို တပေါင်းတစည်းတည်း အတည်ပြုကြောင်း ကြေညာသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ- (၂၁)ရာစုပင်လုံ (ဒုတိယအစည်းအဝေး)မှ အတည်ပြုထားသော သဘောတူညီချက် ၃၇ချက်ကို ပြည်ထောင်စု သဘောတူစာချုပ်၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ရပ်အဖြစ် လက်မှတ်ရေးထိုး ကြသည်။
(သဘောတူညီချက် ၃၇ ချက၊် အစုအဖွဲ့ ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လက်မှတ်များ၊ အသိသက်သေများ လက်မှတ်များကို စာမျက်နှာ(၈) တွင် သီးခြားဖော်ပြထားပါသည်။)ဆက်လက်၍ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင်လုံ ကျင်းပရေး ဗဟိုကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် သဘာပတိအဖွဲ့ဝင် ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာပြည့်က နိဂုံးချုပ် အမှာစကား ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ-(၂၁)ရာစုပင်လုံ (ဒုတိယအစည်းအဝေး) အောင်မြင်စွာပြီးမြောက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
3052017 SportsViewJournal by TheMyawadyDaily on Scribd
30-5-2017 NTY by TheMyawadyDaily on Scribd
3052017 MoethoutPan by TheMyawadyDaily on Scribd
အိန္ဒိယတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် ဦးဆောင်သောချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နေပြည်တော်ရှိ သူရဲကောင်းဗိမာန်နှင့် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်သို့ သွားရောက်လေ့လာ
အိန္ဒိယတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Bipin Rawat ဦးဆောင်သောကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ နေပြည်တော်ရှိ သူရဲကောင်းဗိမာန်အထိမ်းအမှတ် ကျောက်တိုင်ရှေ့၌ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး တာဝန်များကို
ကျေပွန်စွာထမ်း ဆောင်ရင်းအသက်စွန့်လွှတ်ခဲ့ရ သည့်သူရဲကောင်းများအား အလေးပြုစဉ်။
အိန္ဒိယတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Bipin Rawat နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ်ရှိ
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်း၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်သို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး ရောက်ရှိနေသော အိန္ဒိယတပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Bipin Rawat ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ယနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ သူရဲကောင်းဗိမာန်သို့ သွားရောက်၍ အထိမ်းအမှတ် ကျောက်တိုင်ရှေ့၌ ဂုဏ်ပြုပန်းခြင်းချကာ နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးတာဝန်များကို ကျေပွန်စွာထမ်းဆောင်ရင်း အသက်စွန့်လွှတ်ခဲ့ရသည့် သူရဲကောင်းများကို အလေးပြုပြီး ဧည့်သည်တော်မှတ်တမ်း စာအုပ်တွင်လက်မှတ် ရေးထိုးသည်။
အလားတူ ညနေပိုင်းတွင်လည်း နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေး တက္ကသိုလ်သို့ ရောက်ရှိကြရာ သင်တန်းခန်းမ၌ ကျောင်းအုပ်ကြီးက ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက် စကားပြောကြားပြီး ကျောင်းနှင့်ပတ်သက်သည် များကို Video Clip များဖြင့် ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ ၎င်းနောက် အိန္ဒိယတပ်မတော်ကြည်း တပ်ဦးစီးချုပ်က သင်တန်းသားများအား နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး၊ ချစ်ကြည်ရေးနှင့် နယ်နိမိတ်ဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များအား ရှင်းလင်းပြောကြားပြီး ကျောင်းအတွင်းလှည့်လည် ကြည့်ရှုခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
3052017 YadanarponDaily by TheMyawadyDaily on Scribd
3052017 MyawadyDaily by TheMyawadyDaily on Scribd
Posted by myawady at 4:04 PM No comments:
တေဇရုပ်စုံ အတွဲ (၂၉)၊ အမှတ် (၁) ၂၀၁၇ ခုနှစ် ၊ ဇွန်လ
29-5-2017 Tayza by TheMyawadyDaily on Scribd
အိန္ဒိယတပ်မတော်ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် ဦးဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ရောက်ရှိ
အိန္ဒိယတပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Bipin Rawat,UYSM, AVSM, YSM, SM, VSM, ADC ဦးဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့အား ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး
ဗိုလ်မှူးချုပ်သက်ပုံနှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင်ကြိုဆိုနှုတ်ဆက်စဉ်။
အိန္ဒိယတပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် General Bipin Rawat,UYSM, AVSM, YSM, SM, VSM, ADC ဦးဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ယနေ့မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီ မိနစ် ၂၀ တွင် လေကြောင်းခရီးဖြင့် မင်္ဂလာဒုံလေတပ် စခန်းဌာနချုပ်သို့ ရောက်ရှိကြရာ ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ်သက်ပုံနှင့် တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယနိုင်ငံစစ်သံမှူး Col. Naveen Mahajan နှင့် တာဝန်ရှိသူများက လေဆိပ်တွင် ကြိုဆိုနှုတ်ဆက် ကြသည်။
အိန္ဒိယတပ်မတော် ကြည်းတပ်ဦးစီးချုပ် ဦးဆောင်သော ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ညနေပိုင်းတွင် စပါးရှားဂူဗိမာန်နှင့် ရွှေတိဂုံစေတီသို့ သွားရောက်ဖူးမြော်ကြည်ညိုပြီး အလှူငွေများ လှူဒါန်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ယနေ့ည ၆ နာရီခွဲအချိန် တိုင်းထွာချက်များအရ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အလယ်ပိုင်းနှင့် ယင်းနှင့်ဆက်စပ် လျက်ရှိသော ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့တောင်ပိုင်းတွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော မုန်တိုင်းငယ် (Depression) သည် ပိုမိုအားကောင်းလာကာ အားကောင်းသော မုန်တိုင်းငယ် (Deep Depression) အဖြစ် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အရှေ့အလယ်ပိုင်းသို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ ပုသိမ်မြို့၏အနောက် တောင်ဘက်မိုင်၂၆ဝခန့်၊ ကျောက်ဖြူမြို့၏ အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၃၁ဝ ခန့်၊ စစ်တွေမြို့၏အနောက်တောင်ဘက် ၃၂၅ မိုင်ခန့်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံစစ်တကောင်းမြို့၏ တောင်-အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၄၄ဝ ခန့်အကွာပင်လယ်ပြင်ကို ဗဟိုပြု နေပြီး အရှေ့မြောက် ဘက်သို့ရွေ့လျားမည်ဟု ခန့်မှန်းရသည်။ အဆိုပါ အားကောင်းသော မုန်တိုင်းငယ်သည် နောက် ၂၄ နာရီအတွင်း ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း အဖြစ်သို့ ရောက်ရှိနိုင်သည်။
အားကောင်းသော မုန်တိုင်းငယ်၏ လက်ရှိအခြေအနေမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း အနီးမှရွေ့လျားမည့် အခြေအနေ ရှိပါသဖြင့် လိမ္မော်ရောင်အဆင့်ဟု သတ်မှတ်သည်။
အဆိုပါအားကောင်းသော မုန်တိုင်းငယ်သည် မြန်မာစံတော်ချိန် ၁၈းဝဝ နာရီအချိန်တွင် မြောက်လတ္တီကျူ ၁၅ ဒသမ ၂ ဒီဂရီနှင့် အရှေ့လောင်ဂျီကျူ ၉ဝ ဒသမ ၅ ဒီဂရီတွင်ရှိပြီး ဗဟိုချက်လေဖိအား ၉၉၈ ဟက်တိုပါ စကယ်နှင့် အမြင့်ဆုံး လေတိုက်နှုန်းမှာ တစ်နာရီလျှင် မိုင် ၄ဝ မှ ၄၅ မိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါအားကောင်းသော မုန်တိုင်းငယ်၏ အရှိန်ကြောင့် နောက် ၇၂ နာရီအတွင်း နေပြည်တော်၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး၊ တနင်္သာရီတိုင်း ဒေသကြီး၊ ကချင်ပြည်နယ်၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင်ပြည်နယ်၊ ကရင်ပြည် နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ် တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်မှ နေရာအနှံ့အပြား၊ ကျန်တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲ မိုးထစ်ချုန်း ရွာပြီးဒေသအလိုက် မိုးကြီးခြင်း၊ နေရာကွက်၍ မိုးကြီးခြင်းနှင့်လေပြင်း တိုက်ခတ်ခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် ရံဖန်ရံခါမိုးသက် လေပြင်းများကျရောက်ပြီး လှိုင်းကြီးမည်။ မိုးသက်လေပြင်းကျစဉ် ရေပြင်/မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင်မိုင် ၄ဝအထိ တိုက်ခတ်နိုင်ပါကြောင်း မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှု ဦးစီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်ထားသည်။
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်း ဘုတ်ပြင်းတပ်နယ်၊ တနင်္သာရီတပ်နယ်နှင့် ကျွန်းစုတပ်နယ်တို့သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်း
ဘုတ်ပြင်းတပ်နယ်မှ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား တွေ့ဆုံအမှာစကားပြောကြားစဉ်။
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်း တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးထံ စားသောက်ဖွယ်ရာများပေးအပ်စဉ်။
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်း
ဘုတ်ပြင်းတပ်နယ် အတွင်းမွေးမြူရေးဆောင်ရွက်ထားမှုကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်။
ဘုတ်ပြင်းတပ်နယ်အတွင်း မွေးမြူရေးဆောင်ရွက်ထားမှုကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးစဉ်။
ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစိုးဝင်းသည် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများ၊ ကမ်းရိုးတန်းဒေသ တိုင်းစစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူးနှင့်တာဝန်ရှိသူ များလိုက်ပါ၍ မေ ၂၇ ရက်တွင် ဘုတ်ပြင်းတပ်နယ်၊ တနင်္သာရီတပ်နယ်နှင့် ကျွန်းစုတပ်နယ်တို့သို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးသည်။
ဦးစွာဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းနှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ဘုတ်ပြင်းတပ်နယ်သို့ ရောက်ရှိကြရာတပ်နယ်ရှိ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက စီမံချက် ၄ မျိုး နောက်ဆုံးပြင်ဆင် ထားရှိမှုများနှင့် တပ်တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းကြီး ၄ ရပ်ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများကို ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။ ရှင်းလင်းတင်ပြမှုများအပေါ် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် (ကြည်း) ကအရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များ၌ တပ်မတော်၏ငြိမ်းချမ်းရေးမူဝါဒ ၆ ရပ်နှင့်အညီ ပါဝင်ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများနှင့် NCA သဘောတူစာချုပ်ပါ အချက်အလက် များကိုသိရှိထားရန် လိုကြောင်း၊ နယ်စပ်ဒေသ ဖြစ်သည်နှင့် လုံခြုံရေးသတိ၊ လုံခြုံရေးအသိများဖြင့် သွားလာနေထိုင်ကြရန် လိုကြောင်းတို့ကို အသေးစိတ်လမ်းညွှန် မှာကြားသည်။
ယင်းနောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) သည်တပ်နယ်ရှိ အားကစားခန်းမ၌ အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား တွေ့ဆုံအမှာစကား ပြောကြားသည်။
တွေ့ဆုံပွဲအပြီးတွင် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)က အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအတွက် စားသောက်ဖွယ်ရာများ ပေးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက လက်ခံရယူသည်။ ထို့နောက် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရုံးမှ တပ်မတော်အရာရှိကြီးများက သုတ/ရသစာအုပ်စာစောင်များနှင့် အားကစားပစ္စည်းများပေးအပ်ရာ တာဝန်ရှိသူများက လက်ခံရယူကြသည်။ ၎င်းနောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် နယ်မြေခံတပ်အတွင်း စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများကို လှည့်လည်ကြည့်ရှု စစ်ဆေးကြသည်။
ထို့နောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း) နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် နယ်မြေခံတပ်မတော်ဆေးရုံ သို့သွားရောက်၍ တက်ရောက်ဆေးကုသမှု ခံယူလျက်ရှိသည့် အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစု များအားကြည့်ရှုအားပေး စကားပြောကြားပြီး တစ်ဦးချင်း၏ ကျန်းမာရေးအခြေအနေများကို ရင်းရင်းနှီးနှီးလိုက်လံ မေးမြန်းကာ လက်ဆောင်ပစ္စည်းများ ပေးအပ်သည်။
ဆက်လက်ပြီး ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် တနင်္သာရီတပ်နယ်သို့ ရောက်ရှိကြရာ နယ်မြေခံတပ် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက စီမံချက် ၄ မျိုး နောက်ဆုံးပြင်ဆင် ဆောင်ရွက်ထားရှိမှု အခြေအနေများအား ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)က လိုအပ်သည်များလမ်းညွှန် မှာကြားသည်။
၎င်းနောက် ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် တပ်နယ်အတွင်း သက်သာချောင်ချိရေး အရောင်းဆိုင်၊ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများနှင့် ရိပ်သာ ၃ မျိုးဆောင်ရွက်ထားရှိမှုများကို လိုက်လံကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ကြသည်။
ဆက်လက်ပြီး ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)နှင့် အဖွဲ့ဝင်များသည် ကျွန်းစုမြို့နယ်ရှိ ရေတပ်စခန်းဌာနချုပ် သို့ရောက်ရှိကြရာ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ တာဝန်ရှိသူတစ်ဦးက စစ်ဦးစီး၊ စစ်ရေး၊ စစ်ထောက်ဆိုင်ရာများအား ရှင်းလင်းတင်ပြရာ ဒုတိယတပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် (ကြည်း)က လိုအပ်သည်များ လမ်းညွှန်မှာကြားပြီး အရာရှိ၊ စစ်သည်၊ မိသားစုများအား တွေ့ဆုံအမှာ စကားပြောကြားကာ ရေတပ်စခန်းဌာနချုပ် အတွင်းလှည့်လည် ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုပူးတွဲ ကော်မတီ (UPDJC) အစည်းအဝေးကျင်းပ
(၁၁)ကြိမ်မြောက် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UPDJC အစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက် ၉ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် နေပြည်တော်ရှိမြန်မာ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကွန်ဗင်းရှင်းဗဟိုဌာန-၂၌ ကျင်းပရာ UPDJC ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားသည်။
ထို့နောက် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှု ပူးတွဲကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်းကနိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲများအောင်မြင်မှ မိမိတို့ မျှော်မှန်းသည့် ငြိမ်းချမ်းရေး ရရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ နိုင်ငံရေးတွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးမှု မူဘောင်၏သတ်မှတ် ချက်အတိုင်း နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများကို အဆင့်ဆင့်ကျင်းပပြီး တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ၏ ဒေသအလိုက်၊ ကဏ္ဍအလိုက် ဆွေးနွေးမှုများကိုစုစည်းကာ UPDJCသို့တင်ပြခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ အဆိုပါစုစည်းမှု၊ အဆိုပြုမှုများကို UPDJC တွင်အကျေအလည် ညှိနှိုင်း အတည်ပြုပြီး ဆက်လက် အကောင်အထည် ဖော်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ယနေ့ဆွေးနွေးပွဲတွင် ကဏ္ဍအသီးသီးမှ UPDJC အတွင်း ရေးမှူးများ အဖွဲ့သို့ တင်ပြလာသော အဆိုပြုချက်များကို အကျေအလည် ဆွေးနွေးပြီး သဘောတူညီနိုင်သည့် အချက်များ ရရှိနိုင်မည်ဟု ယုံကြည်ပါကြောင်း၊ ဆွေးနွေး သည့်အခါတွင်လည်း မူလရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း အားလုံး လက်ခံနိုင်သည့် အဆိုပြုမှု များရရှိမည် ဟုယုံကြည်ပါကြောင်း ပြောကြားသည်။
ယင်းနောက် ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးသုဝေက အမှာစကား ပြောကြားသည်။
အစည်းအဝေးတွင် နိုင်ငံရေးကဏ္ဍ၊ စီးပွားရေးကဏ္ဍ၊ လူမှုရေးကဏ္ဍ၊ မြေယာနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကဏ္ဍနှင့် လုံခြုံရေး ကဏ္ဍဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့သည့် အကြောင်းအရာများကိုလည်းကောင်း၊ ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ညီလာခံ- (၂၁) ရာစုပင်လုံ (ဒုတိယအစည်းအဝေး) နောက်ဆုံးနေ့ အစီအစဉ် များကို လည်းကောင်း ဆွေးနွေးကြသည်။
ထို့နောက် UPDJC ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌများဖြစ် ကသည့် ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း၊ ဦးသုဝေ တို့က နိဂုံးချုပ် အမှာစကား ပြောကြား ကြပြီး အစည်းအဝေးကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။
အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ကြသည့်အစိုးရ၊ လွှတ်တော်နှင့် တပ်မတော် အစုအဖွဲ့မှကိုယ်စားလှယ် ၁၆ ဦး၊ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းအစု အဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် ၁၆ ဦး၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ အစုအဖွဲ့မှ ကိုယ်စားလှယ် ၁၅ ဦးနှင့် တာဝန် ရှိသူများ တက်ရောက် ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။